Sooyaalka cajiibka ah ee muuqaalka qorraxda ee Apple Watch | IPhone News
Miguel Hernández | 09/05/2022 18:00 | Apple Watch, Alaabada Apple
Apple Watch waxa uu leeyahay qaybo badan oo kala duwan, iyo sida haddii aanay taasi ku filnayn, badidood waa kuwo la beddeli karo ilaa heer daal. Uma adeegayo tusaale ama tixraac, tan iyo markii aan isticmaalayay isla Apple Watch waji tan iyo 2016, laakiin taasi macnaheedu maaha in aan la yaabi karo ka dib liiska xulashooyinka ay shirkadda Cupertino noo diyaariso.
Waxaan kuu sheegaynaa taariikhda xiisaha leh ee muuqaalka qorraxda ee Apple Watch, kaas oo qarinaya siro badan oo ka badan intii aad malayn kari lahayd. Nala soo ogow, yaa yaqaan, laga yaabee inaad sidoo kale ku dhameysato isticmaalkeeda maalinba maalinta ka dambeysa.
Tan iyo markii la bilaabay 2014, Apple waxay si gaar ah u kordhisay tirada garaacyada saacadeeda smart, oo sidaas darteed ta ugu caansan taariikhda, ay awood u leedahay inay soo bandhigto. Laga soo bilaabo 10-ka qaybood ee waddaniga ah ilaa in ka badan 31 oo leh habayntooda u dhiganta ee noo ogolaanaysa inaan hagaajino, maanta roob badan ayaa da'ay, laakiin ha werwerin, Apple Watch waa mid aan biyuhu lahayn.
Inkastoo intooda badan ay diiradda saaraan bixinta macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah ee meesha ugu yar, waxaa sidoo kale jira shaki yar oo ka haray jaceylka xiddigiska iyo jannada, taas ayaa maanta halkan ku keentay iyo waxa ku socda Allow Waxaan kuu sheegayaa waxa ka dambeeya garaaca qorraxda ee Apple Watch.
Imaatinka watchOS 6 ee Abriil 2020, garaaca qoraxda ayaa laga dooday, laakiin mawduucan wuxuu qaadanayaa labanlaab macne marka la eego imaatinka gu'ga. Waxaad u badan tahay inaad ka mid tahay malaayiin qof oo la ildaran xanuunka xilliyeedka (SAD). Imaatinka gu'ga wuxuu si xun u saameeyaa maskaxdeena oo leh calaamado la mid ah kuwa niyad-jabka ee caanka ah, iyo sida saxda ah mid ka mid ah daaweynta ugu fiican ee xanuunkan ku-meel-gaarka ah ayaa si sax ah ugu raaxaysanaya iftiinka maalinta.
1 Faahfaahinta garaaca qorraxda
2 Sida loo fahmo hawl-galka qoraxda
Faahfaahinta garaaca qorraxda
Wejiga qoraxda ee Apple Watch waxa uu ka kooban yahay garaac leh 12 qoraal laakiin u akhriya sida saacad 24-saac ah. Dhexdeeda, qayb ka mid ah garaaca ayaa lagu muujin doonaa buluug khafiif ah iyo qayb kale oo buluug ah oo badda ah, kiiskan Meesha iftiinka leh waxay qeexi doontaa saacadaha qorraxda ee aan ku raaxaysan doono maalintaas iyadoo ku xiran meesha aan joogno, sidaas darteed, aagga mugdigu wuxuu si sax ah u tixraacayaa saacadaha habeenkii. Nuxur ahaan, xariiqda kala saarta labada midab waxay tilmaamaysaa qorrax-soo-baxa iyo qorrax dhaca labadaba.
Dhankeeda, garaaca saacada tilmaamaya wuxuu u ekaan doonaa inuu yahay Qorrax, si la mid ah waxaynu yeelan doonaa qayb kale oo yar oo gudaha ah oo ina tusi doonta saacadda caadiga ah, taas oo aynu ku habayn karno haddaynu rabno qaab analoog ah, ama haddaynu ku doonayno. waxaanu ku rabnaa qaab dhijitaal ah. Ugu dambayntiina, dhammaan afarta gees ee wejiga (maxaa yeelay Apple Watch waa saacad "square") ayaa diyaar kuu ah inaad ku darto wixii dhib ah, isagoo ah in qaarkood ay la qabsan doonaan kontoroolka goobta la doortay, sida caadiga ah.
Sidoo kale, haddii ay dhacdo inaan dooranno dijitaalka hoose, Waxaa nala siin doonaa gacan labaad agagaarka saacada calaamadeeyaha, si aan u helno saxnaanta ugu badan ee suurtogalka ah.
Ugu dambeyntii, haddii aan riixno goobta waxaa naloo soo bandhigi doonaa macluumaadka ku saabsan waqtiga saxda ah ee heerka qorraxda maalinta aan joogno, iyo sidoo kale Faahfaahin ku saabsan wadarta saacadaha iftiinka ee aan ku raaxaysan doono.
Sida loo fahmo hawl-galka qoraxda
Sida iska cad dhammaan macluumaadkan iyo midabada kala duwan ee ay bixiso qaybta qorraxda ee Apple Watch waxaa loogu talagalay in ka badan oo kaliya in la arko marka ay tahay habeen iyo maalin. Marka hore, waxaan ku bilaabaynaa saldhig laga yaabo inay maskaxdaada burburiyaan: Run ahaantii, waaberiga/makhribku wuu ka adag yahay kala-guurka u dhexeeya habeen iyo maalin.. Runtii, waqtiga saxda ah wuxuu ku xirnaan doonaa utility aad rabto inaad siiso qorrax soo bax, iyo sidoo kale meesha aad joogto.
Si loo fududeeyo fahamkaaga, waxaynu adeegsan doonaa ereyga "fiid-bax", kaas oo aan ka badnayn ama ka yarayn tilmaamayaasha nalka ka hor makhribka iyo waaberiga ka hor. Taasi waxay tidhi, garaaca qoraxda ee Apple Watch waxay isticmaashaa wadar ahaan shan midab oo kala duwan oo buluug ah si ay u matalaan wakhtiga maalinta (ama habeenka) taas oo aan ku aragno nafteena, aynu ka soo qaadno kuwa ugu madow ilaa kuwa ugu fudud:
Sawirka: Solinruiz (On WikiPedia)
Habeen: Midabka madow ee garaaca si fudud oo fudud ayaa ka tarjumaya habeenka xiran.
Fiid-xidigeedka: Midabkan meerta ah, kan labaad ee ugu madaw, ayaa ka tarjumi doona iftiinka cirbixiyeenada, taas oo ah, marka qorraxdu <18º tahay, taasina waxay noo ogolaanaysaa in aynu indhaha qaawan ku aragno xiddigaha cabbirkooda lixaad.
Twilight-ka Badda: Halkaa marka ay marayso waxa la soo bandhigi doonaa marka qorraxdu <12º ka hoosayso cirifka sare. Imaanshaha halkan, xiddigaha darajada koowaad iyo labaad waxay arki doonaan isha qaawan.
madawga madaniga ah: Midabka cirifka ahi waxa uu tilmaamayaa in qorraxdu <6º ka hoosayso cirifka hawada sidaas awgeedna, labada cabbir ee xiddigaha iyo meerayaasha waa la arki karaa.
Maalin: Midabka fudud ee garaaca ayaa ka tarjumaya saacadaha iftiinka maalinta oo dhan.
Waana sidan Apple waxay go'aansatay in ay la shaqeyso si sax ah oo aan caadi ahayn shirkadaha caadiga ah, laakiin sida caadiga ah ee shirkadda Cupertino, oo ah, in kasta oo wax walba, loo isticmaali doono oo kaliya sida qaanuunka guud ee kuwa jecel astronomy. ama cilladaheeda kuwa akhriyay maqaalkan oo go'aansaday in ay ku qaadaan goobtan qorraxda ee xiisaha leh.
In kasta oo wax walba, waa goob qurux badan oo lafteeda ah, dhawaaqyo buluug ah oo aad u xiiso badan, inkasta oo Apple ay ku adkaysanayso caadogeeda ah inaysan bixinaynin dhibaatooyinka midabyadooda dabiiciga ah ee dhammaan qaybaha, waxaan qiyaasayaa in iyada oo ujeedadu tahay ilaalinta sixirka noocyada noocan oo kale ah oo gaar ah naqshad kasta. Si kastaba ha ahaatee, waa wakhti kugu habboon inaad ku habayn karto saaxadda qoraxda ee Apple Watch, hadda waad dhoola cadeyn kartaa sababtoo ah waxaad horeyba u ogeyd dhammaan soo gelitaankeeda iyo bannaankeeda, isku indho ma ku arki kartaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Sooyaalka cajiibka ah ee sooyaalka qorraxda ee Apple Watch